ब्रेकिड. न्यूजः गर्भमेन्ट सटडाउन खुल्यो - Enepalese.com
ब्रेकिड. न्यूजः गर्भमेन्ट सटडाउन खुल्यो
यादवराज जोशी २०७५ माघ ११ गते १९:४२ मा प्रकाशित
अमेरिकी राष्ठ्रपति ट्रम्पले शुक्रबार गर्भमेन्ट सटडाउन खुलेको घोषणा गरेका छन् । उनले ह्वाईट हाउसबाट सम्बोधन गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन । गर्भमेन्ट सटडाउन भएको शुक्रबार ३५ औ दिन हो ।
यसले फेब्रुवरी १५ सम्म सीमा पर्खाल बनाउन र सीमा सुरक्षकलाई अत्याधुनिक बनाउने विषयमा रिपव्लिकन र डेमोक्र्याटलाई छलफल गर्न थप समय मिलेको बताए ।
यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्प र विपक्षी डेमोक्र्याटबीच गर्भमेन्ट सटडाउन खुलाउने विषयमा सहमित भएको थियो । अब सीमा पर्खालको मर्मत र सीमा सुरक्षा विषयमा पहिलेको दरमा बजेट दिईनेछ । यसैगरी, अन्य प्रभावित संघिय निकायलाई पनि बजेट दिईनेछ ।प्रस्तावमा सीमा पर्खालका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले मागेको ५.७ अर्ब डलर समावेस छैन ।